संसद्को अन्तिम दिनसमेत जुहारी : कसले कसलार्इ के भने ? « News24 : Premium News Channel
संसद्को अन्तिम दिनसमेत जुहारी : कसले कसलार्इ के भने ?
काठमाडौं । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल शनिबार रातिबाट सकिएको छ । मुलुक अब नयाँ संसद्को खोजीको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।